Andaman Sea « MMWeather Information BLOG
ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တွင် မေလ ၂ဝ ရက်နောက်ပိုင်း မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်
By mmweather.ygn, on May 7th, 2014%
မေလ ၇ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ဝဝး၃ဝ နာရီတွင် ထပ်မံ ရရှိသည့် GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ် ခန့်မှန်း data များအရ မေလ ၁၉ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၂း၃ဝ နာရီ နောက်ပိုင်းမှ စတင်၍ ကပ္ပလီပင်လယ်မြောက်ပိုင်းတွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခု စတင်၍ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး ပိုမိုအားကောင်းလာကာ မေလ ၂ဝ ရက် ညနေပိုင်းတွင် မုန်တိုင်းငယ်တစ်ခု အဆင့်သို့ရောက်ရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
မုန်တိုင်းအဆင့်သို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် မုန်တိုင်း ညာဘက်ခြမ်း၌ ကျရောက်သည့် ဧရာဝတီတိုင်း မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသနှင့် ရန်ကုန်တိုင်း တောင်ပိုင်းတို့တွင် လေပြင်းတိုက်တ်မှု 40 knots(တစ်နာရီ ၄၆ မိုင်နှုန်း) အထိ ရှိနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသဖြင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြရန် အသိပေးတင်ပြအပ်ပါသည်။
. . . → Read More: ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တွင် မေလ ၂ဝ ရက်နောက်ပိုင်း မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်
Leaveacomment MODEL-FORECAST, ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်, မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ, ကြိုတင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်ခြင်း Andaman Sea, ကပ္ပလီပင်လယ် အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းနှင့် မိုးများလာမည့် မြန်မာပြည်
By mmweather.ygn, on July 1st, 2013%
တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ဖြစ်လာသည့် RUMBIA(06W)သည် လာမည့် နာရီအနည်းငယ်အတွင်း တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်း၊ Guang Dong ပြည်နယ် ကမ်းခြေနှု့် ဟိုင်နန်ကျွန်း အရှေ့မြောက်ဘက်တို့အား စ တင် ဖြတ်ကျော် ဝင်ရောက်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။
မုန်တိုင်းအရှိန်ဖြင့် လေစီးကြောင်းများ ပိုမိုအားကောင်းလာသည်ကို တွေ့ရပြီး ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့် ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တို့တွင်လည်း မုတ်သုန်လေအား အလွန်ကောင်းလာကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ အရပ်ရပ်တွင် မိုး များလာပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်၍ မိုးကြီးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း မ်ြနမာနိုင်ငံ မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။ http://www.moezala.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=3&lang=my
. . . → Read More: အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းနှင့် မိုးများလာမည့် မြန်မာပြည်
Leaveacomment ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, မုန်တိုင်းသတင်း, လေတိုက်ခတ်မှုအခြေအနေ 06W, Andaman Sea, Bay Of Bengal, RUMBIA, ကပ္ပလီပင်လယ်, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, တောင်တရုတ်ပင်လယ် မေ ၂၂ ရက်မှ ၂၉ ရက် အထိ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဖြစ်နိုင်ခြေ မရှိ
မေလ ၂၂ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ဝဝး၃ဝ နာရီမှ – မေလ ၂၉ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂၃ဝ နာရီအထိ GFS SW Asia ကွန်ပျူတာ မော်ဒယ်မှ ခန့်မှန်းရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၊ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တို့တွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ်(INVEST) or လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မည့် အခြေအနေမတွေ့ရပါ။
အထက်ပါ ကာလအတွင်း NAVGEM ကွန်ပျူတာမော်ဒယ် WAVE WATCH ၏ ခန့်မှန်းချက်အရ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတွင် အနောက်တောင် မုတ်သုံလေအခြေအနေမှာ အားကောင်းလျှက်ရှိကြောင်း၊ ပင်လယ်ပြင်တွင် လှိုင်းအခြေအနေ အနိမ့်ဆုံး ၇ ပေခန့်မှ အမြင့်ဆုံး ၁၂ ပေခန့်အထိ နေရာလိုက်၍ ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားသည်ကို ပုံများဖြင့် . . . → Read More: မေ ၂၂ ရက်မှ ၂၉ ရက် အထိ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဖြစ်နိုင်ခြေ မရှိ
One comment MODEL-FORECAST Andaman Sea, Bay Of Bengal NOV26 မှ NOV29 အတွင်း ကပ္ပလီပင်လယ်တွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ဘွယ်ရှိ
နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက် – မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂၃ဝ နာရီ(0600Z) မှ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၁၈၃ဝ နာရီ အချိန်အတွင်း ရရှိသည့် ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်(U. S. Navy’s Operational Global Atmospheric Prediction System Model – NOGAPS – http://www.srh.noaa.gov/ssd/nwpmodel/html/nogover.htm)မှ ပုံဖေါ်ရရှိချက်များအား လေ့လာရာတွင် တောင်တရုတ်ပင်လယ်ဘက်မှ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင် တောင်ပိုင်းသို့ ဝင်ရောက်လာမည့် လက်ဝဲရစ်လေစီးကြောင်းများနှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် တောင်ပိုင်းမှ လက်ဝဲရစ်လေစီးကြောင်းတို့ စုပေါင်းပြီး လေဖိအားနည်းဆဲလ်၊ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းမှ မုန်တိုင်းငယ်တစ်ခု အဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာနိုင်မည့် အခြေအနေကို တွေ့ရှိရပါသည်။
ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်မှ တွက်ချက် ခန့်မှန်းပေးမှု မှန်/မမှန်ကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့် . . . → Read More: NOV26 မှ NOV29 အတွင်း ကပ္ပလီပင်လယ်တွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ဘွယ်ရှိ
Leaveacomment MODEL-FORECAST Andaman Sea, Bay Of Bengal လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W နှင့် 95W
Leaveacomment မိုးလေဝသအခြေအနေ, မှတ်တမ်း, ဆောင်းပါး Andaman Sea, Bay of Bangal, East Phillipines Sea, NW-Pacific, South China Sea ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့် ကပ္ပလီပင်လယ်တို့၏ လေစီးကြောင်း အခြေအနေ နှင့် မိုးဇလ မှ နေ့စဉ် မိုးလေ၀သခန့်မှန်းချက်
2 comments မုန်တိုင်းသတင်း Andaman Sea, Bay of Bangal Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum